Etsy Andrefan’Ambohijanahary anio : haka fanapahan-kevitra ny vahoaka sy ny Mitsangana ry Malagasy | NewsMada
Etsy Andrefan’Ambohijanahary anio : haka fanapahan-kevitra ny vahoaka sy ny Mitsangana ry Malagasy
Hetsika faharoa. Hifamotoana amin’ny vahoakan’Antananarivo sy ny avy any amin’ny faritra anio ny eo anivon’ny Mitsangana ry Malagasy. Hotanterahina etsy Andrefan’Ambohijanahary izany ary hampanenoan’izy ireo lakolosy fanairana indray.
« Hetsika natao hampahafantarana amin’ny vahoaka ny loza mihatra sy ny loza mitatao ho an’ny taranaka io. Hitondra vahaolana maharitra sy ny faran’izay haingana izahay. Anjaran’ny vahoaka ny mandray fanapahan-kevitra avy eo amin’ny dingana tokony hotanterahina », hoy ny mpikambana, Raharisaina Hery, omaly. Notsiahiviny fa efa tsy voafehin’ny mpitondra intsony ny fitantanana ny firenena na eo amin’ny sosialy, toekarena sy ny politika amin’ny ankapobeny. « Ho lafo amidy ity tanindrazana ity. Tantely afa-drakotra ny harem-pirenena.. Efa loza mihatra avokoa izany », hoy ihany izy.
Nanteriny fa ho avy eo ireo avy amin’ny faritra hanao tatitry ny tranga miseho any. Fotoana koa anefa io hamondronana ny hery ka iantsoan’izy ireo ny hery politika sy ny fikambanana samihafa na koa ireo sendikà.
Namaly ny antson’ny vahoakan’i Soamahamanina
Tsiahivina ny natao ny 8 jolay teo ny hetsika voalohany nataon’ny Mitsangana ry Malagasy. Nivoitra tamin’ny lahateny samihafa ny filazana fa fitondrana mpanao jadona io ary mpivarotra tanindrazana sy mpambotry firenena. Mpitondra tsy mahay mitantana sy manao z’inona ny zon’olombelona ary manao gaboraraka ny harem-pirenena, araka ny nambaran’izy ireo hatrany. Momba ny lalàn’ny fifandraisana, nambaran’ny Mitsangana ry Malagasy tamin’io fotoana io fa taratry ny fitondrana jadona iny.
Taorian’izany, nihazo an’i Soamahamanina izy ireo ny 18 aogositra teo noho ny antson’ny mponina any an-toerana ary nijery ifotony ny zava-misy, tsy fanekena ny hitrandrahan’ny Sinoa ny haren’izy ireo.
Tsiahivina fa maromaro ireo mpanao politika ngezalahy, mandrafitra ny Mitsangana ry Malagasy. Anisan’izany i Beriziky, Andrianainarivelo Hajo, Rabetsaroana Sylvain, Razanamahasoa Christine…